Isiqithi sase-Itali sase-Vulcano sifuduswe kumanqanaba erhasi enetyhefu ebulalayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Isiqithi sase-Itali sase-Vulcano sifuduswe kumanqanaba erhasi enetyhefu ebulalayo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Usodolophu weVulcano uMarco Giorgianni ukwathintele abatyeleli abangaphandle kwesi siqithi njengenyathelo lokhuseleko.
Phantsi kommiselo omtsha, oqale ukusebenza namhlanje, abahlali base ElamaTaliyaneIsiqithi saseVulcano bayalelwe ukuba baphume kumakhaya abo ngobusuku kwiintsuku ezingama-30 ezizayo, ngenxa yesoyikiso esinokubakho ngenxa yentaba-mlilo.
Abahlali kufuneka baphume kumakhaya abo phakathi kwentsimbi ye-11pm kunye neye-6am ngexesha lasekhaya ngenxa yenkxalabo malunga neegesi ezinokubulala eziphuma kwintaba-mlilo yaseLa Fossa.
NgokukaGiorgianni, la manyathelo angqongqo ayeyimfuneko njengoko “ukungabi nazingqondo kokulala bekungabavumeli abahlali ukuba babone umngcipheko.”
I-Vulcano, eyinxalenye yeziqithi ze-Aeolian, iyakwalela naluphi na ukhenketho kwinyanga ezayo. Ezi ntshukumo ziza kwinyanga emva kokuba i-arhente yokhuseleko lwasekuhlaleni ihlaziye inqanaba lesilumkiso ekubeni “libalulekile,” kwaye kwiintsuku nje emva kokuba iZiko leSizwe le-Italian le-Geophysics kunye neVolcanology lilumkise ngamanqanaba “aphezulu ngokungaqhelekanga” ekharbon diokside kwintaba-mlilo.
Amagosa kwesi siqithi abhengeze imeko yonxunguphalo ecaleni kokunyanzeliswa kwamanyathelo okhuseleko xa kukho ukonyuka kwentshukumo yentaba-mlilo okanye iigesi ezikhutshwa emoyeni.
Iigesi ezikhutshwe yintaba-mlilo zithetha ukuba amanqanaba eoksijini kwisiqithi anokwehla, nto leyo enokubangela ubunzima bokuphefumla. Amanqanaba ekharbhon diokside kuxelwe ukuba anyuke ukusuka kwinqanaba eliqhelekileyo leetoni ezingama-80 ukuya malunga neetoni ezingama-480, ngokutsho kweengcali zentaba-mlilo ezikhankanyiweyo. ANSA.
Esi siqithi - igama laso lidityaniswe 'nentabamlilo' kunye 'neVulcan', isithixo somlilo waseRoma - siye safumana ugqabhuko-dubulo rhoqo kwimbali, kutsha nje ukusukela ngo-1888 ukuya ku-1890.